Wararkii: Dec 31, 2006
"Taangiyada Itoobiya oo u Dhaqaaqay Koonfurta" Aljazeera
Banaanbaxyo looga soo horjeedo Itoobiya
Shariif Xasan: Waa ka xunahay faragelinta Itoobiya...
Melas Zanawi oo sheegay in uu soo gaari..
Cabdulaahi yuusuf oo Afgooye kula ....
Urur Goboleedka IGAD oo haatan u muuqda
Bananaanbaxyo lagu taageerayo dowladda oo ka dhacay Muqdisho
Faarax Macallin: Dhegeyso "Soomaalida ayey u taal in ay Aqbalaan in la Gumeysto"
Telefishanka Aljazeera oo ka war bixinaya xaaladda Soomaaliya ayaa warka ku bilaabay: Taangiyada Itoobiya ayaa Muqdisho looga dhaqaajiyey Koonfurta (30/12/2006) si ay u weeraraan dagaalyahaniinta dhaqdhaqaaqa Maxaakiimta Islaamiga kuwaas oo lagu soo waramay in hoggamiyohoodu uu ugu baaqay in ay xejistan Kismaayo, oo ah deked ku taal Soomaaliya.
Waxaa muuqata in Sheikh Xasan Daahir Aweys uu sidaas kaga baaqay masjid Salaadii Jimcada, maalin ka dib markii unugyo hubaysan oo ah Maxakiimta Islaamiga ee Soomaaliyeed ay ka soo baxeen casimada soo wajahaadii Dabaabadka Itoobiya oo garab siinayey dowladda.
Cali Maxamed Geeddi, Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa uu galay Muqdisho Jimcadii kaddib 10-maalmood oo uu socdey hujuum dhul iyo cir ah oo ay wadey Itoobiya oo garab siineysey dowladda kumeel gaarka ah ee taagta daran, ayey tiri Aljazeera.
Geeddi waxa uu sheegay in lagu guulaystey dagaalka siyaasadeed, laakiin in hoggaamiyayaasha Maxaakiimta Islaamiga ay ballan qaadeen iska caabin.
Geeddi waxa kale oo uu dagaalyahaniinta Maxkamadaha Islaamiga ugu yeeray in ay ka soo qayb galaan wadahadal. Isla mar ahaantaasna waxa uu ka digey cawaaqib xumo laga gudi doono haddii ay dagaalyahaniintaasi fuliyaan hanjabaadooda ah in ay bilaabayaan ololaha dagaalka nooca Guerrilla-ha.
Ciidamada Itoobiya ee Galay Soomaaliya, AP
Ciidamada Xabashida ee galay Soomaaliya: AP
Ciidamada Itoobiya ee xoogga ku galay Muqdisho, AP
Ciidamada Itoobiya ee galay xamar, AP
Diyaaradaha Dagaalka Itoobiya ayaa lagu arkay hawada Kismaayo iyo magaalada u dhow ee Jilib maalmihii Jimcada iyo Sabtidii, sida ay yiraahdeen khubaro xagga militariga.
Askari ka tirsan dawladda Soomaalida ayaa yiri dagaalyahanada Maxkamadaha Islaamiga - oo ay Addis Abaab iyo Washington ku eedeeyen in ay taageero ka helaan Al-Qaeda - in ay miino dhigeen jidka ka soo baxa Muqdisho markii ay ka baxayeen.
"Waxaan ku sii jeednaa Jilib anagoo saaran kolonyo ah taangiyada Itoobiya oo tiradoodu tahay 15 taangi" Sidaas yiri Axmednuur Yaasiin oo telefoon kula soo xiriiray Reuters, oo intaas ku daray "Waxaa jira ciidan dheeraad ah oo kusii jeeda Buaale, waxaana hubaa in dagaalku mar dhow bilaaban doono."
Aljazeera oo ayaa sheegtay in Ilo dawlada Soomaalida ay yiraahdeen: "Dhammaan Argaggaxisadii waxay joogaan Jilib iyo Kismaayo."
Dagaalyahan ka tirsan Maxkamadaha Islaamiga, ayey tiri Aljazeera, oo weydiistey in aan la magacaabin, ayaa yiri:" Waa la dagaalami doonaa Itoobiyaanka hujuumka wada. Jihaadku isma taagi doono."
Baarlamaanka ayaa la filayaa in uu Sabtida u codeeyo in dalka lagu soo rogo saddex bilood oo ah "Xukun Degdeg ah" ama [martial law] kaas oo ujeedadiisu tahay si hubka looga dhigi kumanaan rag ah oo daacad u ah caaqilada qabaa'ilka iyo hoggaamiyaayaasha maleeshiyooyinka maxalliga kuwaas oo loo aaneeyo in ay ku lug leeyihiin carqaladii socotey sanadaha.
Aljazeera waxay warkeeda kusoo xirtay: Dawladda Geeddi gebi ahaanteedu waxay ku tiirsan tahay Addis Ababa xagga muruqa Militari, sida ay yiraahdeen dadka wax falanqeeya, waxaana arrin aan cadayn ah sida ay u maaraynayaan ammaanka ciidanka Itoobiyaanaka la'aanteed.
Shariif Xasan: Waa ka xunahay faragelinta Itoobiya, degdegna ha uga baxaan Itoobiya...
Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG, Shariif Xasan Sh. Aadan ayaa mar uu la hadlay British Broadcasting Corporation waxa uu sheegay in ay ad iyo aad uga xunyihiin ciidamada Itoobya ee soo galay ciidda Soomaaliya, waxana uu ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan, haddii kalena ay Soomaalidu iska difaacaan, kana dhiidhiyaan. Mar uu ka hadlaayey xagga sharciga waxa uu sheegay madaxda ogol Itoobiyanka in ay khaladan yihiin. Waxana uu carrabaabay khiyaano qaran. Shariif Xasan iyo Faarax Macallin oo siyaasi reer Kenya ah oo ka hadlaya duulaanka Itoobiya [Halkan ka dhegeyso].
Shariif Axmed: "Maxaakiimtu waa la dagaalamaayaan Cadowga Allah"
Dhanka kale hay'adda wararka ee AP waxay werisey in Sh. Shariif Sh. Axmed oo ku sugan Kismaayo uu yiri "Waxaan idiin sheegayaa in maxkamadiha Islaamku ay weli nool yihiin ayna la dagaalamayaan Cadowga Allah."
AP waxa kale oo ay tiri in badan oo dadka Soomaaliyeed ee Muslimka ah waxay shaki ka qabaan kutiirsanaanta ay dawladdu ku tiirsan tahay dalka deriska ah ee dadkiisa in badan ay yihiin Kirishtaan dalkaas oo ay Soomaalida ka dhexeyso muran xooggan, 1977 ayaana dagaal dhiig badani ku daatay uu dhex maray Soomaalida iyo Itoobiya.
Wakaalada AP oo hadalkiida sii wadata waxay sheegtay in: Qaybo kamid ah Muqdisho laga dhigay mudaharaadyo looga soo hor jeedo dawladda, halka 300 oo qof ay qayb kale oo magaalada ah ku dhigeen bannaanbax ay ku taageerayaan ciidamada, kuwaas oo sitey tabeelayaal ay ku qoran yihiin "Waxaan tageersanahay Dawladda".
Ka hor intii aan Islaamiyiintu qaban maamulidda Muqdisho waxaa xakumi jirey qabaa'il iska soo horjeeda kuwaas oo isugu yimid in ay tageeraan dagaalyahaniinta Maxkamadaha. Hadda, qaar ayaa ka cabsi qaba in qabaa'ilkii ay soo laabtaan oo midba kan kale la dagaalamo, ayna dhici karto in ay diidaan xukunka dawladda. Waxayna AP warkeeda kusoo xirtay: Siyaasada Qabaa'ilka Soomaalida oo ah mid cakiran kuwaas oo sabab u ahaa isku day 14 jeer oo la rabey in dawlad laga hir geliyo dalkaan rabshada iyo qalaalasaha.
"Itoobiya Qorshe Kama Laha Soomaaliya"
Sida ay qortay shabakda wararka Shiinaha ee Peoples Daily: "Itoobiya wax qorshe ah kala leh Soomaaliya, laakiin waxay rabtaa in ay ka hor tagto halista ay xornimadeeda ku hayaan madaxda xag-jirka ah ee Midowga Maxaakiimta Islaamiga", sidaas waxaa Sabtidii yiri wasiirka warfaafinta ee Itoobiya. Waxaa faallo taas ka duwan qortay Sudan Tribune.
Shabakada Sudan Tribune oo hadalkeeda sii wadata waxay tiri: Keligii taliyaha Itoobiya xaqiiqo ahaan ma ka welwelsan yahay Jihaadiistayaasha ama argaggaxiso? Dadka la caburiyey ee Itoobiya arrintaas waxay u arkaan in aysan ahayn yoolka saxda ah ee Zenawi, balse in uu magac ku raadsanayo la dagaalanka Argaggaxisada. Xukuumadiisuna waxay fulisey xasuuq isaguna waxa gacmaha ka wasasheeey dhiigga bini aadamka, ayey tiri Sudan Tribune. [Sid aad wax uga ogatid ragga magaca ku leh Itoobiya ee ku jira xabsiyada dalkaasi, akhri [Shacabka Reer Addis Ababa Sidee u Arkaan Dagaalka Soomaaliya].
Isha: Aljazeera, Peoples Daily, Sudan Tribune, AP, AFP, Reuters
Waxaa ka socda Dalka gudihiisa iyo dibadiisa banaanbaxyo looga soo horjeedo, duulaan ciidamada xabashida wadanka soomaaliya kuna qabsadeen Caasimada soomaaliya ee Muqdisho waxayna banaanbaxyadaan kuwooda ugu daMbeeyay ka dhAceen Muqdisho, cariga Ingiriiska iyo Maraykanka waxayna Banaanbaxayaasha ku qeylinayeen �Doonimayno xabashi� �waa in ciidamada tikreega ah si dhaqsi ah uga baxaan soomaaliya �
Jidadka waa weyn ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa isugu soo baxay dadwayne aad ufara badan oo jidadka ku gooyay dhagxaan iyo Taayiro waxayna sheegeen in ay la dagaalami doonaan ciidamada Xabashida iyo kuwa soo horkacay ee Dowlada Fedaraalka, Banaanbaxayaasha waxay hor istaageen ciidamo xabashi oo doonayay in ay Magaalada dhexmaraan waxayna ku tuurayeen Dhalooyin ay ku jiraan waxyaabaha Qarxa waxaana gawaarida qaarkood soo gaaray khasaarooyin dhinaca Miyaaradaha
Melas Zanawi oo ah Raiisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in uu imaan doono Magaalada Muqdisho oo ay ugu dambeeysay muddo dhowr iyo toban sano xili uu Muqdisho ku joogay Magangelyo siyaasadeed oo ay u fidisay Dowladii xiligaasi oo uu madaxda u ahaa Maxamad Siyaad Barre
Melas ZanawI wuxuu Muqdisho u joogay isagoo mucaarad ku ahaa madaxweynihii hore ee wadanka Itoobiya Mangiste waxaana Melas la siiyay tas-hiilaadka uu u baahnaa sida isgaarsiinta, waxbarashada iyo wixii kharashaad ah,
Melas wuxuu sheegay in uu aad u jecel yahay in uu soo eego magaalada Muqdisho, goobihii uu wax ku baran jiray iyo waliba Xeebta liido oo uu dalxiis ku tagi jiray hase yeeshee dadka qaarkii waxay sheegeen in ay ku adkaan doonto imaashaha magaalada muqdisho waayo shacabka soomaaliyeed waxay si aad ah uga soo horjeedaan Ciidamada Itoobiya ee qabsaday soomaaliya.gaar ahaan Magaalada Muqdisho
Cabdulaahi Yuusuf Axmad oo ah madaxweynaha Dowlada fadaraalka ayaa shalay soo gaaray Magaalada Afgooye ayaa waxa uu kulan la yeeshay masuuliyiin ka tirsan dowlada, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiin caan ah wuxuuna sheegay in dowlada fadaraalka ay gacan ka geysan doonto nabad galyada Gobolka Banaadir, sidoo kale wuxuu sheegay in la aruurin doono hubka gacanta u jira bulshada,
Madaxweyne Cabdulaahi yuusuf wuxuu sheegay in aysan dib u soo laaban doonin qabqablayaashii dagaalka oo ay muqdisho ka saareen Maxaakiimta isagoo sheegay in dowlada fadaraalka ay wado qorshayaal bulshada iskugu keenayso oo la xiriira dhinaca dib u heshiisiinta.
Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmad wuxuu sheegay in xasilinta Magaalda Muqdisho loo xilsaaray Ra'iisul wasaare Cali Maxamad Geedi iyo ku xigeenkiisa arimaha gudaha Xuseen Caydiid iyo Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliiska iyo Xooga Dalka.
Urur goboleedka IGAD oo la aas aasay sanadihii sideetameeyihii ayaa haatan umuuqda mid sii bur buraya kadib markii qaar ka mid ahi dowladahaaasi ay aad uga caroodeen duulaankii ciidamada Xabashida ee Soomaaliya,
Dowladaha ay ka mid yihiin Jabuuti. Kanya, Suudaan, iyo Eretaria ay si aad ah u canbaareeyeen duulaankaasi kuna tilmaameen mid sii kordhinaya dhibaatada soomaaliya iyo waliba geeska Afrika, waxay codsadeen dowladahaasi in ciidamada Itoobiya ay si dhaqsa leh uga baxaan soomaaliya isla markaana in kooxaha isku haya soomaaliya ay soo fariistaan miiska wadahadalka,
Dowlada Jabuuti ayaa waxay sheegtay in ay san udulwqaadandoonin duulaanka ciidamada Xabashida ay ku qaadeen soomaaliya kuna qabsadeen caasimada
Madaxweynaha DFKMG oo Dib ugu Baqoolay Baydhabo
. Kismaayo oo Si Weyn Looga Ciidey...
.Sidii looga ciidey magaalada Qardho...
.C/Lahi Yuusuf oo Kasoo Degey Afgooye...
.Afhayeenka Xisbiga Ramaas ee England oo la magacaabay
.Xisbiga Ramaas oo ku baaqay xabada joojiyaan...
Wararka oo dhan ka akhri halkan..... Dec 30
Dad soo dhoweynayey Geeddi. Sawirka: AFP
Dec 30, 2006: Bannaanbaxyo lagu taageerayo oo ay kasoo qeybgaleen boqolaal dadweyne ayaa maanta ka kala dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo dadweynaha ay ku dhawaaqayeen erayo ay kusoo dhoweynayaan xukuumadda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya.
Deegaanada Waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa si weyn looga soo dhoweeyay ciidamada dowladda Federaalka KMG ah ee soo galay gudaha magaalada Muqdisho, waxaana maanta dadweynaha ay kor u sideen sawirada Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra'iisul Wasaare Cali Maxamed Geeddi, iyadoo erayo ay ka mid ahaayeen soo dhowaaw Mudane Yuusuf iyo soo dhowoow Mudane Geeddi, waxayna sidoo kale ay ku shirbayeen QABIIL QABIILKA WAA QUBMEE, QARANKA MA ISLA QAADANAA iyo erayo kale.
Banaanbaxyadan oo ka kala dhacay wadooyinka Fiat ilaa Sanca iyo mid kale oo isagana ka dhacay Hotelka Ramadaan ilaa Towfiiq, waxaana dadku ay maanta hilmaameen munaasabada Ciidul Adxaa oo aan si weyn looga xusin Muqdisho.
Qorista Ciidamadii Hore Oo Ka Socota Muqdisho
Waxaa si xowli ah magaalada Muqdisho ugu socda isdiiwaan gelin ay sameynayaan ciidamadii hore ee qalabka siday, iyadoo ciidamadaasi ay ka kooban yihiin dhowr qeybood, waxaana kusoo aruuraya halka isdiiwaan gelinta ka socoto ciidamo aad u fara badan, kuwaasoo u diyaar ah iney ku biiraan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.
Isdiiwaan gelintan ciidamada qalabka sida ayaa waxay ka socotaa Hotelkii hore ee Towfiiq ee magaalada Muqdisho, waxaana howshaasi isdiiwaan gelinta ah wada qaar ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliya, oo iyagu saxaafadda u sheegay iney dowladda la og tahay iney diiwaan geliyaan ciidamadii hore ee Soomaaliya.
Ciidamadii hore ee xooga dalka oo in mudo ah howlgelin ayaa haatan u muuqda kuwo garab ka helaya dowladda Federaalka Soomaaliya isla markaasna diyaar u ah iney daafacaan oo la shaqeeyaan dowladda KMG ah, waxayna arintani soo dedejineysaa in dowladdu awood ballaaran u sii lahaato xasilinta dalka iyo daafaciisa.
Dec 29: Banaan baxyo Rabshado wata oo Lagu diidan yahay ciidamada Tigreega ka dhacay Magaalada muqdisho.